Web Umsunguli kudinga ukuba bill Inthanethi amalungelo - Izindaba Rule
Web Umsunguli kudinga ukuba bill Inthanethi amalungelo
A bill of rights kufanele wadala elawula Internet ngemva izambulo mayelana likahulumeni ukubhekwa ukujula, umsunguli we-World Wide Web ngoLwesithathu.
Tim Berners-Lee wenza isiphakamiso njengoba ingxenye “web sifuna” umkhankaso i-Inthanethi evulekile, ncamashi 25 ngemva kweminyaka waqale wethule iphepha izinhlelo World Wide Web.
“Sidinga umthethosisekelo global — umthethosivivinywa amalungelo,” esho etshela Guardian.
“Ngaphandle kokuba sinawo evulekile, Internet kokungathathi hlangothi singathembela bengabheki ukuthi kwenzekani emnyango emuva, asikwazi babe uhulumeni evulekile, intando yeningi enhle, kwezempilo okuhle, imiphakathi axhunyiwe nokwehluka namasiko,” uthe.
“Akukona ukuzikhohlisa ukucabanga singaba naso ukuthi, kodwa kuwubuwula ukucabanga nje sikwazi ukuhlala emuva nokuwenza.”
Lo mkhankaso ubiza on web-abasebenzisi emhlabeni wonke ekubhaleni i “Abasebenzisi Internet Bill of Rights izwe lakho, isifunda sakho noma wonke”.
Berners-Lee njalo iye phambili emkhankasweni wokuthi zokulawula abangaphansi kuwebhu, futhi isishayele ihlombe owayeyisekela intelligence usonkontileka Edward Snowden ngemva kokuba wembula imininingwane yendlela uhulumeni wase-US Iqoqa uquqaba idatha ku-intanethi.
Berners-Lee waxwayisa ngokuthi amalungelo abantu babeyizinkulungwane “luyaphulwa ngokwengeziwe nhlangothi zonke” nokuthi abasebenzisi Internet base beba saneliseke ngalokhu ekulahlekelweni kwabo inkululeko.
“Ngakho ngifuna ukusebenzisa yokugubha usuku-25 ngenxa yethu sonke ukwenza lokho, ukuthatha kuwebhu emuva ezandleni zethu siqu futhi ichaze web sifuna for the next 25 iminyaka,” uthe.
Berners-Lee wakhulelwa Web cishe 25 eminyakeni eminingi edlule ngesikhathi sakhe sokuphumula eGeneva-based ukukhathalela, top kuyizinhlayiyana physics lab eYurophu.
21843	0 ukukhathalela, Edward Snowden, Geneva, Guardian, National Security Agency, Tim Berners-Lee, I-united states, Iwebhu yomhlaba jikelele
← Sevastopol, scene of ubukhazikhazi Russian, bemagange ukuhlabelela 'uhambe ekhaya’ 20 Ngempumelelo Home Izixazululo izinyawo zingavuvukalanga →